‘सञ्जु’ बन्यो २०१८ को सर्वाधिक कमाइ गर्ने बलिउड फिल्म, कसको कमाइ कति ? - Khabar Break | Khabar Break
‘सञ्जु’ बन्यो २०१८ को सर्वाधिक कमाइ गर्ने बलिउड फिल्म, कसको कमाइ कति ?
बलिउडमा स्टार अभिनेताहरुले अभिनय गरेका चलचित्रहरु सजिलै सय करोड क्लबमा पर्छन् । यस्तैमा सन् २०१८मा २ वटा फिल्महरुले भने २ सय करोडको कलेक्सन गरे ।
सञ्जय दत्तको वायोपिक चलचित्र ‘सञ्जु’ले सन् २०१८ मा धेरै कमाइ गर्दै २०१८ मा सर्वाधिक कमाउने चलचित्र बन्यो । रणवीर कपुरको अभिनय रहेको यो फिल्मले भारतमा ३ सय ४१ दशमलव २२ करोड भारु कमायो ।
यस्तै अर्का अभिनेता रणवीर सिंहको फिल्म ‘पद्मावत’ दोस्रो बन्यो । रणवीर, दीपिका पादूकोण तथा शाहिद कपूरको यस फिल्मले तीन सय करोड कमायो । यस्तै रजनिकान्त र अक्षय कुमारको अभिनय रहेका ‘२.०’ ले भारतमा मात्रै एक सय ८८ करोड भारु कमायो ।
यता रणवीर सिंहको ‘सिम्बा’ले पनि २ सय करोड भारु कमाउने अपेक्षा गरिएको छ । ’सिम्बा’ अहिलेपनि भारतका विभिन्न हलहरुमा चलिरहेको छ । हालसम्म यो फिल्मले एक सय ७३ दशमलव १५ करोड भारु कमाएको भारतीय अनलाईन कोइमोइले जनाएको छ ।
यस्तै सलमानको ‘रेस ३’ ले एक सय ६९ करोड कमाउँदा, टाइगर श्राफको ‘बाघी २’ ले एक सय ६५ करोड कमायो । श्रद्धा कपूरको ‘स्त्री’ले १ सय २९ दशमलव २१ करोड कमायो भने आलिया भट्टको ‘राजी’ले १ सय २३ दशमलव १७ करोड भारु कमायो । यस्तै आमिर खानको ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ले एक सय ४५ दशमवल २९ करोड भारु कमायो ।